နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်၏စာပုံးသည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာတွင်လင့်များထားရန်တောင်းခံနေသည့် spam SEO ကုမ္ပဏီများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်အောင်တောင်းဆိုမှုများစွာရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်စိတ်ဆိုးစေသည်။ ဤတွင်အီးမေးလ်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့သွားသနည်း
ခင်ဗျားဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးကို [သော့ချက်စာလုံး] ပေါ်မှာရေးခဲ့တယ်ဆိုတာသတိရတယ်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဆောင်းပါးကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရေးသားခဲ့သည်။ ငါမင်းရဲ့ဆောင်းပါးအတွက်ကောင်းတဲ့ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်လို့ငါထင်တယ်။ မင်းတို့ဆောင်းပါးကိုလင့်ခ်နဲ့ကိုးကားနိုင်ရင်သိပါစေ။
ပထမ ဦး စွာသူတို့သည်ဆောင်းပါးကိုအမြဲတမ်းစာရေးသည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီရန်နှင့်သူတို့လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုအတိအကျသိသောအခါကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားသည်။ နေရာချပါ။ website ရဲ့ backlink။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်၍ သင်၏စာမျက်နှာများကိုမှန်ကန်စွာရည်ညွှန်းနေစဉ်ထိုစာမျက်နှာများသည်၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးမြင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအရေအတွက်အားဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။
အခုဆိုရင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် crawler ကကျနော့်စာမျက်နှာကိုတွားသွားပြီး၊ ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအညွှန်းနဲ့အရင်းအမြစ်တွေဆီကိုအခွင့်အာဏာပေးဖို့ backlinks တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ nofollow လင့်များ။ ငါရေးပြီးတဲ့အကြောင်းအရာအတွင်းရှိ destination page နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီ anchor tags တွေမှာ nofollow attribute မရှိပါ။ သူတို့ကိုခေါ်ကြသည် Dofollow လင့်များ။ ပုံမှန်အားဖြင့် rel attribute ကိုထပ်ထည့်။ link ၏အရည်အသွေးကိုမဆုံးဖြတ်ပါက link တိုင်းသည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအခွင့်အာဏာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။
backlinking မှတဆင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါဒေါ်လာဘီလီယံတန်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဖောက်သည်များအဆင့်အတန်းမြင့်တက်စေရန်ကူညီရန်ညတွင်းချင်းစတင်ခဲ့သည်။ SEO ကုမ္ပဏီများသည်အလိုအလျောက်တည်ဆောက်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့သည် link စိုက်ခင်းများ နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် manipulate ဖို့ဓာတ်ငွေ့အပေါ်အရှိန်မြှ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂူဂဲလ်ကသတိထားမိသည်နှင့်အားလုံးပြိုကွဲသွားသည်။
backlinks များစုဆောင်းမိသော site များ၏ rank ကိုစောင့်ကြည့်ရန် Google သည်၎င်း၏ algorithms ကိုတိုးတက်ခဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ, authoritative domains များ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလင့်ခ်များကိုပေါင်းထည့်ခြင်းသည်သင့်အားမကူညီနိုင်ပါ။ မြင့်မားသောသက်ဆိုင်ရာနှင့်အခွင့်အာဏာရှိသောဆိုဒ်များတွင် backlink များကိုရရှိခြင်းသည်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်လင့်ခ် spamming သည်သင်၏အဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂူးဂဲလ်၏ထောက်လှမ်းရေးသည်ခြယ်လှယ်မှုများကိုခွဲခြားပြီးသင့်အတွက်အပြစ်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူတွေကကျွန်တော့်ကိုဆောင်းပါးတွေတင်တဲ့အခါသူတို့ကျောက်ဆူးတွေထဲမှာသိသာထင်ရှားတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေသုံးလေ့ရှိတယ်။ ဂူဂဲလ်၏အလဂိုရီဇင်များသည်အလွန်ရယ်စရာကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မယုံကြည်ပါ။ သင်၏ link အတွင်းရှိစာသားသည်အရေးအကြီးဆုံးသောသော့ချက်စာလုံးများသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဂူးဂဲလ်ကလင့်ခ်ပတ်ပတ်လည်ရှိအကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါကကျွန်ုပ်မအံ့သြပါ။ မင်းရဲ့အချိတ်အဆက်တွေနဲ့မင်းဒီလောက်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ သံသယဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားစာဖတ်သူအတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ ဒါကြောင့်ငါကလူတွေကိုတကယ်မြင်ချင်တဲ့အပြင်ထွက်သွားတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ခလုတ်တွေကိုသုံးတယ်။
ထို့အပြင်ကျောက်ဆူးတံဆိပ်နှစ်ခုလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုမမေ့ပါနှင့် စာသားမ အဖြစ်တစ်ဦး ခေါင်းစဥ် သင့်ရဲ့ link ကိုဘို့။ ခေါင်းစဉ်များသည်ဖန်သားပြင်ဖတ်သူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုဖော်ပြရန်ကူညီနိုင်သည့် attribute တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် browser (ဘရောက်ဆာ) အများစုက၎င်းကိုပြသသည်။ ခေါင်းစဉ်စာသားထားခြင်းသည်အသုံးပြုသောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်သင်၏အဆင့်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်းရှိမရှိ SEO gurus ကသဘောမတူပါ။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ငါကဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအလေ့အကျင့်င်ထင်နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ရဲ့ link ကိုကျော်ကြွက်နှင့်အစွန်အဖျားတင်ဆက်တဲ့အခါအနည်းငယ် pizazz ထည့်သွင်း။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်ခံရရှိသည့်အခြားအီးမေးလ်ဖြစ်သည်။ ငါတကယ်တော့ဒီအဖြေကိုပေးတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်နာမည်ကိုစွန့်စားပြီးစွန့်စားခိုင်းတယ်၊ အစိုးရကဒဏ်ငွေရဖို့နဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေကနေဖယ်ထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတာလား။ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတဲ့တောင်းဆိုချက်ပါ ဒါကြောင့်တခါတလေငါကပဲတုံ့ပြန်လိုက်တာကို ၀ မ်းသာမယ်လို့ငါပြောလိုက်တယ်။ သူတို့ဟာ backlink အတွက် $ 18,942,324.13 ကုန်ကျမယ်။ ငါပိုက်ဆံကြိုးတပ်ဖို့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတုန်းပဲ။
ဂူဂဲလ်၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်း - သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏လခပေးသောလင့်ခ်ကိုဂူဂဲလ်ရှာဖွေသူများအတွက်ဖုံးထားရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။
စီမံခန့်ခွဲရန်ရည်ရွယ်မဆိုလင့်များ PageRank သို့မဟုတ်ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ဆိုဒ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်လင့်ခ်အစီအစဉ်နှင့်ဂူဂဲလ်၏ချိုးဖောက်မှုဟုယူဆနိုင်သည် Webmaster လမ်းညွှန်ချက်များ.
ကမကထပြုထားသောလင့်ခ်များကအသုံးပြုသည်ကိုဂူဂဲလ်ကမေးလေ့ရှိသည် nofollow ဂုဏ်ရည်။ သို့သော်၊ ယခုသူတို့သည်၎င်းကိုပြုပြင်ပြီးငွေပေးချေသောလင့်ခ်များအတွက်ပံ့ပိုးပေးသည့် attribute အသစ်တစ်ခုရှိသည် -
အဘယ်ကြောင့် Backlinkers ရုံမှတ်ချက်ရေးရန်မထားသနည်း
PageRank ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆွေးနွေးပြီးဘလော့ဂ်များကိုမြင်ကွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါမှတ်ချက်သည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်အဓိကနေရာမှာ (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်တွစ်တာမတိုင်မီ) သာမကသင်၏ရေးသားသူအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီးသင်၏မှတ်ချက်များတွင်လင့်ခ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည့်အခါတွင်ရာထူးလွန်သွားသည်။ Comment spam ကိုမွေးဖွားခဲ့သည် (ယနေ့ခေတ်တွင်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ) ။ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့်မှတ်ချက်စနစ်များသည်မှတ်ချက်ရေးသားသူပရိုဖိုင်းများနှင့်မှတ်ချက်များအပေါ် Nofollow လင့်များကိုမတည်ထောင်မီမကြာမီတွင်ဖြစ်သည်။
External သည်အခြား attribute တစ်ခုဖြစ်ပြီး crawlers ကို link တစ်ခုသွားကြောင်းသိစေရန်ဖြစ်သည် ပြင်ပ ဆိုက်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့အကြီးအကျယ်အငြင်းပွားစရာပဲ။ ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် spammy အီးမေးလ်များသည်အမှန်တကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမခံနိုင်ပါ။ ငါယုံကြည်ဖို့အခိုင်အမာယုံကြည်တယ် အသကျမှေး လင့်များ, သူတို့အဘို့မမေးပါ။ ငါ့သူငယ်ချင်းကောင်း Tom Brodbeck ကဒါကိုသင့်လျော်စွာအမည်ပေးခဲ့သည် linkearning ပါ။ ငါသည်ငါ့ site မှထောင်ပေါင်းများစွာ၏ site များနှင့်ဆောင်းပါးများကိုလင့်ထားသည် ... သူတို့ link ကိုရရှိခဲ့လို့ပဲ။
ထိုအရာကကျွန်ုပ်ထံရောက်ရှိနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးနိုင်သလားဆိုသည့်ပြIနာမရှိပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် မင်္ဂလာပါ ကြောင်းဆောင်းပါးအတွင်း link ကို။ ဆောင်းပါးများစွာကိုကျွန်ုပ်ငြင်းပယ်သည်။ အကြောင်းမှာတင်သွင်းသူများသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါသောကြောင့်၎င်းတွင်ထင်ရှားသောနောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပါရှိသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်စိတ်ကူးဆောင်းပါးများဖြစ်ကြောင်းအများအပြားအများအပြားထုတ်ဝေရန်နှင့်စာရေးသူအသုံးပြုသော link ကိုငါ့စာဖတ်သူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်။
ငါဆက်သွယ်ရေးလုပ်ပေးဘူး ... ငါပြန်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းနီးပါး 110,000 link များရှိသည် Martech Zone။ ငါထင်တာကဒီ site မှာငါခွင့်ပြုထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေရဲ့အရည်အသွေးကိုသက်သေပြနေတယ်။ သင့်ရဲ့အချိန်ကိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာထုတ်ဝေသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်း ... နှင့် backlinks ကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
Tags: backlink အဝေးရောက်နောက်ကြောင်းပြန်website ရဲ့ backlinkမှတ်ချက်များလင့်များဖွင့်လှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပါdofollow လင့်များဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်FTCgoogle search consoleဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ+ googlelink ကိုဝင်ငွေlink ကိုအရည်အသွေးlink တည်ဆောက်ခြင်းnofollownofollow လင့်များအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လစာလင့်များအရည်အသွေးလင့်များrelrel dofollow ဖြစ်သည်rel nofollow ပါrel sponsorrel ugcရှာဖွေရေးအင်ဂျင် crawlersရှာဖွေရေးအဆင့်ကမကထပြုထားသောလင့်ခ်များugcugc လင့်များwordpress သည် dofollow ဖြစ်သည်wordpress nofollow မရှိ
sal cangeloso ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်သည် Drupal-powered ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖွင့်ထားသဖြင့် rel = nofollow မပါဘဲထည့်သွင်းပြီး၎င်းကိုထည့်ရန်သင်ပလပ်ဂင်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငါခဏလုပ်ဖို့အကြောင်းပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်အခြားလူများရဲ့က်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်ငါစွန့်ခွာနေတဲ့မှတ်ချက်များငါ့ကိုစာမျက်နှာရာထူးပေးခြင်းနေကြသည်မဟုတ်သောအနှံ့သဘောသဘာဝကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ် ငါကအဖြစ်ကထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်စုံတစ် ဦး က“ ကောင်းသော site” ဆိုသောမှတ်ချက်ထွက်သွားပါက URL နေရာကွက်လပ်ကိုသူတို့မထားပါကမှတ်ချက်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမူဝါဒမရှိရင်ငါ link ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့် site ပေါ်တွင်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်မနေခံစားရတယ်။
ဟုတ်ပါသည်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားလုံးသည်လိုက်နာရန်မလိုပါ။ ဂူဂဲလ်သည်ပိတ်ပင်ထားမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကြီးမားသောယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုအတိုင်းဖြစ်လာသည်။ Live, Ask သို့မဟုတ် Yahoo! ထွက်တွက်ဆအချို့တူးယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုရှာရန်နောက်ကျကြောင်းသိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် blog စတင်ခြင်းနှင့် wordpress အဘယ်ကြောင့် noffollow ကိုကျွန်ုပ်၏လင့်ခ်တွင်ထည့်သွင်းနေသည်ကိုစတင်ရှာဖွေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုရှာတဲ့အတွက်ငါ dofollow ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့ Blog အသစ်မှာမှတ်ချက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအားပေးလိမ့်မယ်။
ပါ ၀ င်မှုနှင့်မည်မျှတိုက်ရိုက်ကူညီသည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာက 'ငှက်တကောင်၏ငှက်များအတူတကွပျံသန်းသည်' လို့ဆိုလိုတာကသင်ဟာ nofollow ကိုအသုံးမပြုတဲ့အခြားဘလော့ဂ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပါ ၀ င်ဖို့ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ငါထင်တယ်။
ဘလော့ဂ်လုပ်ရာ၌ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုများစွာသည်သင်ကဲ့သို့သောရှေးရှေးသူများ၏စကားဝိုင်းတွင်ပါ ၀ င်မှု၌အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ငါဘာကြောင့်အကျိုးအမြတ်အားလုံးကိုရယူသင့်သလဲ။ !
Doug, ဒီ nofollow အရာသည် blogger နှင့်တရားဝင်commentီကာဆရာနှစ် ဦး စလုံးအတွက်တကယ်နာကျင်ခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ယောက်က admin ရဲ့အလိုအလျောက် nofollow ကို enable / disable ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ plugin တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်စေချင်ပါတယ်။ ငါသုံးခဲ့တဲ့ nofollo plugins အားလုံးဟာမှတ်ချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဝေဖန်သူအားလုံး၏ nofollow tag ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ U ပြောခဲ့သလိုပဲလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေရဲ့မှတ်ချက်ကိုအတည်ပြုဖို့ဇီဇာကြောင်နေကြတယ်
ဂျက်စီသဘောတူတယ် WordPress သည်ထိုတုန့်ပြန်ချက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏ဖိအားအောက်တွင်ရှိနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဒီကိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုစတင်ရုံသာမကဘလော့ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုကြည့်နေပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်သုံးနိုင်သောစည်သွတ်ဘူးဘလော့ဂ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ကျွန်ုပ်အား wordpress ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (၂) ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာဂူဂဲလ်နောက်ကျောချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။ နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယစာမျက်နှာတွင်အပြာရောင်မှဂူဂဲလ် backlink (၁၀) ခုပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာငါအမြဲတမ်းတင်ထားတယ်၊ မင်းအဲဒီ့လင့်ခ်ကိုရချင်တယ်ဆိုတာတောင်မသိခဲ့ဘူး။ (duh, newbie!) ပြီးတော့ရုတ်တရက်ငါ Dawud Miracle ကနေလင့် ၁၀ ချက်ရတယ်။ သူဘယ်သူလဲဆိုတာ ??? ငါသည်သူ၏ site ကိုပြန် link ကိုနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်ငါပြသခဲ့သည်ငါများစွာသောဘလော့ဂ်များအများအပြားထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နားလည်သဘောပေါက်ကျေးဇူးတင်စကား, ကအံ့ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် !!! အဲဒီနောက်ငါဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာကြောင့်မဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုငါသိချင်ခဲ့တယ်။ ဒါဆိုအခုငါရပြီ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတက်တဲ့အခါငါကျိန်းသေ no- နောက်ဆက်တွဲအမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲအောက်ပါအချက်များကိုရပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့အားလုံးအောင်မြင်ဖို့လုံလောက်တယ်။